Uvavanyo lwe-Neuropsychological diagnostical kunye novavanyo lokunyanga intetho (ukukhula kweminyaka) -Uqeqesho lokuqonda
Uvavanyo lwe-Neuropsychological diagnostical kunye novavanyo lokunyanga intetho (ukukhula kobudala)
Ulapha: ikhaya » Iinkonzo zethu » IINKONZO-Ubuntwana kunye nokufikisa » Uvavanyo lwe-Neuropsychological diagnostical kunye novavanyo lokunyanga intetho (ukukhula kobudala)
Yenzelwe bani: Abantwana kunye nolutsha olunengxaki yesikolo
Ihlala ixesha elingakanani: Iintsuku ezi-2-3 malunga
Ixabisa malini: 304
Iphela njani: Ingxelo yokugqibela kunye nokufunyanwa kwesifo
Uvavanyo lonyango lwe-neuropsychological kunye nentetho luthetha ntoni?
Injongo yenkqubo yokuxilongwa kukwenza enye Uvavanyo oluchanekileyo lwezakhono kunye nobunzima yenkwenkwe, ngokusebenzisa iintetho e uvavanyo ebekwe emgangathweni yokuvavanya izakhono kwiindawo ezininzi.
Izakhono eziphandiweyo zininzi, kubandakanya nezi ulwimi, la imemori, L 'Attenzione kunye nezakhono ze nokuqiqa. Kwiimeko zobunzima besikolo, ziyenziwa iimvavanyo ezikumgangatho ofanayo ekufundeni nazo (ukufunda, yokubhala e yokubala).
Ekupheleni kovavanyo, kukhutshwa ingxelo ebhaliweyo apho kuxelwa khona iimpawu eziphambili (ubunzima kunye namandla) omntu.
Ngamanye amaxesha ezi mpawu zivumela ukwenza uphononongo lwesifo esithile sokufunda (dyslexia, dysorthography, dyscalculia, dysgraphia), ukuphazamiseka kwengqwalaselo (ADHD) kunye / okanye Ukuphazamiseka kolwimi oluthile.
Nakuphi na ukuxilongwa kwe-DSA okukhutshwe ekugqibeleni kovavanyo kwamkelwe kwi-Emilia-Romagna njengokufumana isifo kwiNkonzo yezeMpilo yeSizwe.
Olu hlobo lwendlela lufanelekile ngakumbi kwiintlobo ezininzi zeemeko. Umzekelo, xa umntu enobunzima bokuhlala ejonge, ekhumbula ulwazi kunye neenkqubo (izicatshulwa ekufuneka zifundwe, iitafile zokuphindaphinda, iinkqubo zokubala ...), ukucacisa imixholo, ukufunda ngokuchanekileyo kunye nokuqonda ulwazi olubhaliweyo nolomlomo. Ngokukodwa, iluncedo xa ezinye zezi meko zikrokrelwa:
dyslexia (iingxaki zokufunda)
dysorthography (iingxaki zopelo)
dyscalculia (iingxaki zokubala)
dysgraphia (iingxaki zokwenza ubhalo olufundekayo)
ADHD (ingqalelo kunye neengxaki zokushukuma)
Udliwanondlebe. Lixesha lokuqonda elijolise ekuqokeleleni ulwazi olufanelekileyo malunga nembali yezonyango yesigulana. Eli nqanaba linceda ekuchongeni ingxaki enokubakho kwaye linikezela ngoqhelaniso lokuqala ukuseta isigaba sovavanyo.
Uvavanyo kunye nenkqubo yokuchonga. Ngexesha lovavanyo, umntwana (okanye inkwenkwe) uya kuvavanywa okunenjongo, iyonke, yokuphanda ukusebenza kwengqondo nokusebenza kakuhle.
Uyilo lwengxelo kunye nodliwanondlebe olubuyayo. Ekupheleni kwenkqubo yokuphononongwa, kuya kwenziwa ingxelo eya kuthi ishwankathele okuphuma kwizigaba ezidlulileyo. Iziphakamiso zongenelelo ziya kuxelwa. Le ngxelo iya kuziswa kwaye icaciselwe abazali ngexesha lodliwano-ndlebe olubuyayo, becacisa izigqibo abafikelele kuzo kunye neziphakamiso zongenelelo ngoncedo.
Yintoni enokwenziwa ngokulandelayo?
Ngokusekwe koko kuphume kuvavanyo, iindlela ezahlukeneyo zinokuphunyezwa:
Kwimeko yesifo sokufunda esithile, ngenxa ye ifunda i170 / 2010, Isikolo kufuneka sivelise uxwebhu olubizwa ngokuba sisiCwangciso esiBalulekileyo somntu (PDP), apho aya kubonisa izixhobo zokukhuphela kunye nokusasaza kuya kufuneka azisebenzise ukwenza imfundiso yobuqu kwiindlela zokufunda zomntwana / zenkwenkwe (jonga kwakhona: isifo se-DSA: yintoni ekufuneka uyenze ngokulandelayo?).
Kwimeko yobunye ubunzima, umzekelo, ingqalelo okanye imemori, kusenokwenzeka ukuba nako ukwenza isicwangciso sokufundisa esenzelwe wena ngokommiselo wesetyhula I-BES (Iimfuno ezizodwa zemfundo).
Ngapha koko, iintlanganiso ze kwintetha Therapy ukuphucula imiba enxulumene nolwimi okanye ukufunda (ukufunda, ukubhala nokubala), Izifundo ze-neuropsychology ukuphucula ingqalelo kunye nezakhono zokukhumbula kunye nezifundo zoqeqesho lwabazali ukufumana izicwangciso ezifanelekileyo zokulawula iingxaki zokuziphatha komntwana.